Gịnị bụ ihe kasị mma na-ere cordless phones maka ezinụlọ? | ECommerce ozi ọma
Gịnị bụ ihe kasị mma na-ere cordless phones maka ezinụlọ?
Encarni Arcoya | | CMS na Teknụzụ
Ọ bụ eziokwu na enwere ekwentị na ekwentị na-agbada n'ụlọ, ojiji nke landline ka dị n'ụlọ ma ọtụtụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ. Mana, n'adịghị ka tupu ejiri "USB" eme ihe, ebe ọ bụ na ekwentị na-enweghị eriri pụtara, na-enye nnwere onwe nke ndị smartphones na-enye, anyị niile họọrọ maka ndị a.
Ọ dị mma ugbu a Kedu ekwentị ndị kachasị mma maka ezinụlọ? Kedu ụdị ndị kachasị ere ahịa? Nke a na ọtụtụ ndị ọzọ bụ ihe anyị ga-atụle ugbu a.
1 Kedu ihe bụ ekwentị mkpanaaka
2 A na-ejikwa eriri igwe ikuku?
3 Ihe ngwọta zuru oke maka ezinụlọ: duo na ekwentị atọ
4 Ndị a bụ igwe na-enweghị ego na-ere ere
Kedu ihe bụ ekwentị mkpanaaka
Ekwentị na-enweghị eriri bụ n'ezie ngwaọrụ nke na - ejikọtaghị ọnụ ya site na eriri, na - enye gị nnwere onwe ị ga - agagharị na ebe ị tinyere ya. Anyị na-ekwu "eziokwu" n'ihi na n'ezie enwere mmachi, na ọ bụ Ekwentị na-enweghị eriri ga-arụ ọrụ naanị mgbe ọ nọ na njedebe nke ọdụ ahụ. Nke ahụ bụ, mita ole na ole site na ya. Ọ bụrụ na ị gafere n'ihu, ị nwere ike ịkwụsị ịnụ onye ị na-agwa okwu ma ọ bụ ọbụladị ekwentị anaghị akpọ gị.
Ya mere, ọ dị iche na akara ala nke oge gara aga na ọnwụ nke "eriri" ahụ jikọtara ọnụ na ekwentị ahụ. Na nloghachi, gbanwere ekweisi ahụ ka ọ nwee igodo ọpịpị ma n'otu oge ahụ ọkà okwu na ekweisi, na-ahapụ njedebe naanị ka enwere ike ịgba ngwaọrụ a.
A na-ejikwa eriri igwe ikuku?
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, a na-ejikarị ụdọ ụgbọ ala n'ụlọ. Ọ bụ eziokwu na ọ dịkarịa ala, n'ihi na ọtụtụ na-etinye ọtụtụ awa ịhapụ ụlọ na mmefu nke ọnụọgụ ọnụọgụ kwa afọ abụghị ihe ha chọrọ ịhapụ onwe ha; ma enwere ụlọ ebe ha bara uru, ma ọ bụ n'ihi na mmadụ nọ n'ụlọ mgbe niile, ma ọ bụ naanị n'ihi na na-enye gị uru karịa mobiles. Iji maa atụ, eziokwu ahụ bụ na ị ga - enwekarị ike ịnwepụ “mkpuchi” dị ka ekwentị.
Ihe ọzọ kpatara iji akara ala bụ ọnụahịa nke ha, ebe ọ bụrụ na i jiri ya tụnyere nke smartphones, ngwaọrụ nke ndị a dị ọnụ ala karịa, nke ga-adịkwa ogologo karịa ekwentị, nke na-akwụ ụgwọ ugbu a.
O kwere omume chọta ndị na-enweghị ekwentị mkpanaaka (n'ihi na ee, e nwere, na ọ bụghị naanị ndị agadi) bụ ọzọ nke uru nke landlines, nakwa dị ka ndị nwere dịtụ ala udu (ma ọ bụ free si Landline na Landline) mgbe na-ekwu okwu banyere-akpọ mba ọzọ (ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere a oke oku na mobile).
Ọ bụrụ na ihe niile a anyị na-agụnye eziokwu na ndị ọzọ na ndị ọzọ na-chọrọ ikuku igwe yiri ekwentị, mana edoziri, nke bu eziokwu bu na inwetara otutu ihe. Ihe kpatara eji edozi ndozi ndị a.
Mkpebi nke inwe ekwentị ekwentị ma ọ bụ na ị gaghị enwe dabere na ojiji ị ga-enye ya. Ma n'ime ndị a, ndị ikuku ga-enye gị nnukwu uru dị ka ọ bụ eziokwu na ị gaghị "ejedebe" na ohere nke ekwentị na-ejedebe na njedebe, mana ị nwere ike ịgagharị n'ụlọ gị kpamkpam, ohere iji ya na Bluetooth ma ọ bụ WiFi ...
Ihe ngwọta zuru oke maka ezinụlọ: duo na ekwentị atọ
Ugbu a, n'ime igwe na-enweghị eriri, ha na-ahụ ọtụtụ ụdị, ụdị, wdg. nke na-eme nhọrọ ahụ adịghị mfe dịka ọ na-ada. Ọ bụ eziokwu na atụmatụ ha nwere, otu ị nwere ike iji ya. Mana enwere ụdị ụfọdụ nke ọkacha mmasị ezinụlọ. Anyị na-ekwu maka duos na wireless cordless kacha mma.
Kedu ihe bụ ekwentị abụọ na eriri atọ? Cheedị ihe ndị a: ị nwere ụlọ nwere ọtụtụ ime ụlọ, ime ụlọ, kichin na ime ụlọ ịwụ. Y’oburu na inwere ugwo ala, you gha achota ya n’ime ulo. Ma n'ezie ọ ga-amasị gị ịnweta akụkụ ndị ọzọ nke ụlọ, dị ka n'ime ime ụlọ gị, ma ọ bụ ọbụna na kichin.
Ọ bụrụ na eriri ala a enweghị eriri, naanị itinye otu n'ime ime ụlọ ahụ ezuola, n'ihi na ị nwere ike iji ya na-agagharị n'ụlọ, mana ọ bụrụ na ọ na-akwụ ụgwọ ma ha kpọọ gị ma ị nọ ebe ọzọ karịa ime ụlọ, dịka ọmụmaatụ ime ụlọ gị ? Ga-ebili gaa kpụrụ ya. Ma ọ bụ ihe siri ike, ọkachasị n’oge ụfọdụ.
Ya mere, ihe ngwọta ya bụ ịnwe ekwentị abụọ na-enweghị eriri. Ma ọ bụ atọ. Ma ha niile nwere njikọ. Gịnị ka anyị na-ekwu? Ga-ekwe omume nke inwe abụọ ma ọ bụ atọ ọnụ na ga-akụ n'otu oge ma ọ bụrụ na oku ekwentị batara, nke ga-enye ike Kpọọ n'etiti ọnụ (nke kachasị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka nọ n'afọ iri na ụma na-agbachi onwe ha n'ime ụlọ ha ma na ị ga-akpọ oku), nke ahụ na-enyekwa gị nnwere onwe karịa n'echiche na ị nwere ike ịchọta ha na mpaghara ndị kachasị mkpa ma ọ bụ ọbụna nwee ike iji aka ya mgbe niile ebe obula imaara na ebujuru ya (igbanwe ya ka ha si ebu).
Ndị a bụ igwe na-enweghị ego na-ere ere
N'ikpeazụ, anyị achọghị ịhapụ isiokwu ahụ n'ebughị ụzọ kwuo obere banyere ụdị ndị kacha ere ahịa. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile na-eme ọnụ, duos na trios dị mfe, mana ọ bụ eziokwu na ụfọdụ nwere ọfụma na ekwentị ikuku.
Nke a bụ ikpe Panasonic, Gigaset (ebe ị ga - ahụ ụdị ụdị ekwentị abụọ dị na atọ), Motorola ma ọ bụ Phillips. Ugbu a, ha bụ ụdị ndị a na-anụkarị ma na-atụ aro ya na ụdị dị iche iche nke ụdị ọ bụla. Ọ ga-adabereworị na ihe ị na-achọ site na ekwentị ekwentị ịhọrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Gịnị bụ ihe kasị mma na-ere cordless phones maka ezinụlọ?
Etu esi eji mkparịta ụka vidiyo na eCommerce
Gịnị bụ Mondial Relay